नुन नै नखाँदा के हुन्छ? – MEDIA DARPAN
नुन नै नखाँदा के हुन्छ?
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Dec 10, 2018
चिकित्सक भन्छन्, ‘नुन धेरै नखानुहोस्, हानी गर्छ ।’ खासगरी उच्च रक्तचापका रोगीले चिकित्सकबाट यस्तो सुझाव पाउने गर्छन् । हुन त नुनको अधिक प्रयोग शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ नै । तर, नुन के हो ? कसरी यसले हानी गर्छ ? किन गर्छ ? कति मात्रा सेवन गर्नुपर्छ ? इत्यादि प्रश्नको जवाफ पाइदैन ।
आफ्नो खानामा नुनको मात्रा कम गर्नु भन्नुको अर्थ नुन नभएको वा थोरै नुन प्रयोग गरिएको खानेकुरा खानु भन्ने हो । तर, थोरै-थोरै नुन प्रयोग गरिएको खाना धेरै पटक सेवन गर्दा पनि त शरीरमा नुनको मात्रा बढ्ने भो ।
नुनको मात्रा कम गर्नु भन्नुको अर्थ दिनभरको खानपानमा कति मात्रामा नुन सेवन गरिन्छ भन्ने मोटामोटी अनुमानबाट यसको हिसाबकिताब निकाल्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, नुन सेवन गर्दा हानिकारक हुन्छ भन्ने बुझाईसँगै कतिले नुनको सेवन चटक्कै छाड्छन् । के नुन सेवन पूर्णत निषेध गर्नुपर्छ ? वा त्यसको अरु कुनै विकल्प छ ? यावत् प्रश्नबारे पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्छ ।
हुन त नुनबारे त्यती चासो र सरोकार नहुन सक्छ । यो कुनै विषाक्त तत्व होइन पनि । दैनिक खानामा नुन समावेश हुन्छ । तर, पछिल्लो समय जीवनशैली र खानपानको कारण जसरी मानिसहरु रोगी बन्दैछन्, त्यसले नुनलाई पनि संवेदनशिल विषयभित्र राखेको छ । अर्थात नुन कति खाने, किन खाने भन्ने कुरामा चासो राख्नु जरुरी भइसकेको छ ।
त्यसो त अहिले बजारमा एकथरीका मात्र नुन छैन । अनेकथरीका नुन उपलब्ध छन् । रंग, स्वाद, गुण सबैमा विविधता छ । यदि विज्ञापनमा भर गर्ने हो भने, यी सबै किसिमको नुन आफैमा अब्बल भन्ने दावी गरिएको पाइन्छ । यसले उपभोक्तालाई द्विविधामा पार्छ नै ।
यस्तो अवस्थामा एक प्रश्न उठ्छ कि, नुनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रभावित गर्छ ?
नुन के हो ?
घरमा हामी अक्सर प्रयोग गर्ने नुनलाई टेबल साल्ट वा सफा नुन भनिन्छ । यस नुनलाई सोडियम क्लोराइड भनिन्छ । सोडियम र क्लोरिन दुई तत्व मिलेर बनेको नुन हो यो ।
शरीरका लागि किन जरुरी छ ?
दिमागदेखि शरीरका अन्य अंगसम्म सूचना आदन-प्रदान गर्नका लागि सोडियमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । साथै मांसपेशीलाई सक्रिय बनाइराख्नका लागि सोडियम चाहिन्छ ।
कुन नुन कस्ताे ?
स्वस्थ जीवन: बिना औषधी, बिना उपचार